Md. Xasan sheikh ?Afrika waxay diyaar u tahay rajo dowlad awood leh oo Soomaaliya yeelato? – Radio Daljir
Md. Xasan sheikh ?Afrika waxay diyaar u tahay rajo dowlad awood leh oo Soomaaliya yeelato?
Oktoobar 14, 2013 4:24 b 0
Muqdisho, October 14, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa rajo wanaagsan ku tilmaamay taageerada Afrika ay siinayaan dadka iyo dowladda Soomaaliya, xili uu soo idlaaday shirkii madaxda Afrika oo intiisa badan looga hadlay arrimaha ICC.
Madaxweyne Xasan sheikh maxamuud oo shir jaraa?id ku qabtay muqdisho kadib markii uu ka soo laabtay Adis ababa ayaa sheegay in dalalka Afrika ay muujiyeen taageeradooda shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan, isagoo xusay in la isku afgartay in la xoojiyo ciidamada ee Soomaaliya.
?Afrika waxay isku raacday in la taageero qorshaha amaanka dalka Soomaaliya iyo horusocodka dib-u-heshiisinta.? Ayuu yiri Madaxweyne Xasan sheikh saxafiyiinta kula hadlay Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu soo dhoweyey dalabka madaxda Afrika ay ku codsadeen in AMISOM lagu daro in ka badan 6,200 oo Askari oo hor leh, kuwaas oo kaalin wayn ka noqonaya qorshaha nabad illaalinta ee AMISOM.
Hugaamiyaasha Afrika ayaa go?aan isku mid ah ka qaatay maxkamada ICC kaas oo ahaa in aysan u yeeri karin hugaamiye xil haya oo Afrikaan ah, madaxweynaha oo arrintaas ka hadlay ayaa sheegay in ay taageersan yihiin go?aanka ay qaateen madaxdu, waxaa uu xusay in tallaabadaas tahay mid horumar oo la qaaday.
Maal-geliyihii Burcad badeeda Soomaaliya oo lagu qabtay Brussels iyo dacwad lagu soo oogay